मधेशको समस्या र राष्ट्रियताको अन्तरसम्बन्ध –मोहनविक्रम सिंह Weekly Nepal
मधेशको समस्या र राष्ट्रियताको अन्तरसम्बन्ध –मोहनविक्रम सिंह
मधेशको समस्याबारे विचार गर्दा शुरुमा नै मधेशका आम जनता र मधेशवादीका बीचको अन्तरबारे स्पष्ट हुनुपर्ने र तिनीहरूको बीचको अन्तरलाई सही अर्थ, सन्दर्भ वा परिप्रेक्षमा बुझ्नु पर्ने आवश्यकता छ । मधेशी भनेर हामीले त्यहाँका आम जनतालाई बुझ्दछौँ । तराईको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई मधेश भन्न मिल्छ कि मिल्दैन वा त्यसलाई तराई भन्नु पर्दछ ? त्यसबारे मतैक्यता छैन । तर अहिले हामी त्यो विषयको छलफल पट्टि लाग्दैनौँ । मधेशी भन्ने तराईको एउटा खास समूदाय हो र त्यहाँ अरू पनि कैयौँ समुदायहरू बस्दछन्, जसमध्ये थारु समुदाय तराईमा प्राचीन कालदेखि बस्दै आएको एउटा जाति हो । त्यो बाहेक तराईमा पनि कैयौँ समुदाय, जाति, जनजाति आदि बस्ने गर्दछन् । तर ती सबैभन्दा बेग्लै मधेशवादीहरू हुन् ।
नेपालमा सामन्ती शोषण र उत्पीडनद्वारा सबैभन्दा पीडित तराईमा नै छन् । त्यहाँका किसान, महिला, दलित नेपालभरि नै सबैभन्दा बढी शोषित र उत्पीडित छन् । त्यहाँका जमिन्दार, सामन्तवर्गद्वारा जनता सबैभन्दा बढी पीडित छन् । सामन्ती व्यवस्थाद्वारा सम्पूर्ण देश नै शोषित र उत्पीडित छ । त्यस प्रकारको शोषण, उत्पीडनको अन्त शोषित, उत्पीडित जनताको वर्गसङ्घर्षद्वारा नै हुन सक्दछ । त्यसका लागि देशभरका सबै जनताको बीचमा बलियो एकताको आवश्यकता छ । तर जनताका बीचमा एकता हुन नदिन प्रतिक्रियावादीहरूले कैयौँ प्रकारको षडयन्त्र गर्ने गर्दछन् वा कैयौँ प्रकारका भ्रमहरू फैलाउने गर्दछन । जनताका बीचमा फुट पार्ने उनीहरूका सबैभन्दा ठूलो हतियारहरू हुन् जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद । तराईमा क्षेत्रीयतावादको आधारमा त्यहाँका जनतामा फुट पार्न सङ्गठीत रूपले प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसरी त्यहाँ पहाडि र मधेशी भनेर मधेशवादी र त्यहाँका जमिन्दार, सामन्तवर्गले जनताको बीचमा फुट पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसका दुईवटा उद्देश्यहरू रहेका छन् ः प्रथम, भारतीय विस्तारवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्नु । द्वितीय, तराईको सामन्ती शोषण, उत्पीडनलाई कायम राख्नु । त्यस प्रकारको क्षेत्रीयतावादको नीति एकातिर, देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हित र, अर्कातिर, मधेशी जनताका पनि हितको विपरित छ ।
त्यो विधेयकको मुख्य मुद्दा हो ः सीमाङ्कन । त्यसको अर्थ हो पहाडि भूभागबाट अलग गरेर तराईको बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण । त्यसरी तराईका बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण गर्नुको उद्देश्य हो – तराईलाई नेपालबाट अलग गराउनु र अन्तमा तिनीहरूलाई भारतीय सङ्घमा सामेल गराउनु । त्यस प्रकारको पृथकतावादी उद्देश्यसित मधेशका जनताको टाढाको पनि सम्बन्ध छैन ।
सरकार मधेशवादीका अगाडि निरिह र लाचार भएर उभिएको देखिन्छ । संविधानमा गरिएको भूगोल र जनसङ्ख्यालाई समान आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने व्यवस्थालाई बदलेर जनसङ्ख्यालाई प्रमुख र भूगोललाई गौण बनाउने संविधानमा संशोधन गर्ने काम मात्र गरिएन, मधेशीहरूको दवावमा २ नं. प्रदेशका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको सङ्ख्या बढाउने कार्य समेत गरियो । जनसङ्ख्याको दृष्टिले प्रदेश नं. २भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका अरू प्रदेशहरू पनि छन् । (प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं. ३) । तर ती दुवै प्रदेशहरूमाभन्दा प्रदेश नं. २ मा गाउँपालिकाको सङ्ख्या बढी बनाइयो छ । वास्तवमा मधेशवादीहरूको दवावमा नै संविधानमा मनोमानी प्रकारले काटछाट गर्ने त्यसलाई अङ्गभङ्ग गर्ने कार्य गरिएको छ । मधेशवादीहरूको दवावमा नै सीमाङ्कनमा प्रदेशहरूको अनुमोदन चाहिने संवैधानिक बाधालाई हटाउन २७४ नं. धारालाई पनि हटाउन प्रस्ताव राखिएको थियो र प्रदेशसभाहरूलाई भएको अधिकारलाई संसदले खोस्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नीतिगत रूपमा सङ्घीयताको अर्थ हुन्छ तल्ला तहका इकाईहरूलाई बढी अधिकार दिनु । तर व्यवहारमा स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गरिएको अधिकारमा कटौती गर्ने प्रयत्न गरियो वा प्रदेशहरूलाई प्रदान गरिएको अधिकारलाई संसदमा ल्याउने कार्य गरियो । त्यसरी जहाँ र जुनबेला आवश्यक भयो, मधेशवादीहरूको माग अनुसार सङ्घीयताका मान्यताहरूमाथि पनि कुठाराघात गर्ने प्रयत्न गरियो ।
मधेशवादीहरूले तराईका शोषित, उत्पीडित, महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिको उत्थान वा हितका लागि कुनै काम गर्न चाहन्नन् । उनीहरूको उद्देश्य त्यो होइन पनि । उनीहरूको प्रधान उद्देश्यता भारतीय विस्तारवादको सेवा हो । तराईका मधेशी, थारु, जनजाति, आदिवासी, महिला, मुस्लिम वा अन्य विभिन्न उत्पीडित समूहहरूको मुक्ति वा उत्थानका लागि सामान्यतः सम्पूर्ण सामन्ती व्यवस्था र विशेषतः तराईका सामन्त, जमिन्दार तथा मधेशवादीहरूका विरुद्धको सङ्घर्षले नै निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । तर विडम्बनाको कुरा हो कि त्यस प्रकारका तत्वहरूले नै तराईमा मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, मुस्लिम जनताका हितैषीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् र त्यसबारे जनतालाई काफी हदसम्म भ्रम दिन पनि सफल भएका छन् । त्यसकारण त्यस प्रकारको भ्रमका विरुद्ध जनतामा चेतना दिनु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।